I-DaVine Guest House
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Kim
Isitezi esingaphansi kwesitayela sezimboni esisanda kuqedwa/i-condo enekhishi elikhulu nokwanele
indawo yokuvakashela. Indawo yokulala evulekile, enombhede wendlovukazi, umbhede wendlovukazi, 2 wesikhumba u-Ashley queen odonsa ngaphandle kanye negumbi labomatilasi bomoya abayizindlovukazi abangu-2. Umgwaqo owodwa phezulu usuka e-Main St. maphakathi nedolobha. Ukubuka okumangalisayo komfula kanye ne-lighthouse. Ukungena kwangasese futhi ngaphakathi kwebanga lokuhamba kuyo yonke into eGrafton!
Indawo yokulala evulekile ingase ingabi eyawo wonke umuntu, kodwa iyindawo enhle ngempela yemindeni kanye namaqembu abangani. Umyeni wami ngivela emindenini emikhulu kakhulu futhi ngithanda ukujabulisa abantu abangu-50+ kulesi sikhala. Ungenza izinkumbulo ezinhle futhi uqale amasiko amasha lapha!
Umbhede omkhulu ongu-1, 2 imibhede yosofa, omatilasi abangu- 2
4.97 ·74 okushiwo abanye
Indawo esihlala kuyo incane futhi wonke umuntu uyazi ukuthi singabasingathi. Akujwayelekile ukuthi bame babingelele bephuma bephuma.
Mina nomyeni wami singabanikazi be-The Whole Scoop, isitolo sika-ice cream & yokudlela kanye nesitolo sezipho ngaphesheya komgwaqo, i-River Bank Gifts. Siyayithanda i-Grafton futhi siyathanda ukuhlangana nabantu abakhethe i-Grafton ukuze bathole indlela!
Mina nomyeni wami singabanikazi be-The Whole Scoop, isitolo sika-ice cream & yokudlela kanye nesitolo sezipho ngaphesheya komgwaqo, i-River Bank Gifts. Siyayithanda i-Grafton futhi…